eNasha.com - बिचरा लोग्नेहरु !
बिचरा लोग्नेहरु !
बेलायती लोग्नेमान्छेको पीर कसले पो बुझिदेला ! हालै गरिएको एक सर्भेका अनुसार बेलायती लोग्नेमान्छेहरुको वर्षको अधिकांश समय श्रीमती वा आफ्नी प्रेमिकालाई पर्खदैमा बित्ने गरेको छ ।
अधिकांश मानिसहरुको वर्षको २२ हप्ता या त कुनै पसलअघिल्तिर कुर्दै गर्दा या कोठा सर्दैमा अनि कि त प्रेमिका र श्रीमतीले लुगा लगाउँदै गर्दा कुरेर नै बित्ने गरेको छ ।
एनानोभा समाचार एजेन्सीले हालै प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार झण्डै वर्षको एक साता त उनीहरुले आफ्नी श्रीमती या प्रेमिकालाई कारमै कुर्दा खर्चिर्ने गरेका छन् । यसमा आफ्नी प्रेमिकालाई डिस्कोमा जाँदा या राति अबेर कहीँ घुम्न जाँदा पनि एक साताभन्दा बढी समय उनीहरुले कुर्ने गरेका छन् ।
यसरी कुर्नुपर्दा रिसले आगो हुने गरेको पनि ती लोग्नेमानिसहरुले सर्भेमा बताएका छन् । यसरी रिसले आगो हुनेहरुको संख्या १० जनामध्ये ६ जना रहेका छन् । यता ४० प्रतिशत लोग्ने मानिसहरु चाहिँ श्रीमती र प्रेमिकाहरुको यो बानीसँग आफूलाई 'एडजस्ट' गराइसकेका छन् ।
पाँचमध्ये एक जना चाहिँ श्रीमती वा प्रेमिकाले किनमेल गरिरहँदा अन्य युवतीतिर पनि आँखा लगाउने गरेको सर्भेले देखाएको छ ।
दुइ हजार मानिसहरुबीच गरिएको सर्भेको उद्देश्य चाहिँ लोग्नेमानिसहरु कतिबेरसम्म कुर्न सक्तारहेछन् भन्ने जान्नका लागि गरिएको थियो । यो सर्भे मिसबटरफ्लाईडटकोडटयुकेका लागि गरिएको एनानोभाले जनाएको छ ।